Thu, Apr 19, 2018 | 23:26:06 NST
08:33 AM (9months ago )
ओपिडीमा एक्कासी मुसाले टोकेका बिरामीको संख्या बढ्यो । ओपिडी सकेर यसो मुसाले टोकेको बिरामीको प्रतिशत हेर्दा आफै अचम्मित भएँ । झन्डै ४० प्रतिशत बिरामी त मुसाले टोकेर परामर्श लिन आएका रहेछन् । यो संख्या भन्दा सयौँ गुणा बढी त निजी क्लिनिक वा अरु अस्पतालमा गएका हुन सक्छन् ।
त्यति नै संख्यामा मानिसहरु आफ्नै परिवारका सदस्य वा छिमेकी वा नजिकको क्लिनिकमा गएर परामर्श लिएको हुनुपर्छ । टेकु अस्पताल आउनेहरु भने आफै वा कसैको सल्लाहमा रेबिज विरुद्धको खोप लिने आशयले आउने गरेको देखिन्छ ।
मुसाले टोके के हुन सक्छ ?
मुसाले टोके स्ट्रेप्तोब्यसिलरी र स्पाईरिलम गरी दुइ प्रकारका ब्याक्टेरियाको संक्रमणको उच्च जोखिम हुन सक्छ । यी ब्याक्टेरियाहरु संक्रमित मुसाले टोके वा चिथरे मात्र पनि मानिसमा सर्न सक्छ । यसलाई समग्रमा र्याट बाइट फिवर भनेर बुझ्ने गरिन्छ । दैनिक मुसाले टोकेर मानिसहरु आउने गरेता पनि मेरो सम्झनामा एकाध व्यक्तिले मात्र मुसाको टोकाई पछि ज्वरोको शिकायत लिएर आएको देखिन्छ । यसको अर्थ बाँकी कसैलाई केही भएन भन्ने चाही होइन, सायद उनीहरु नजिकैको क्लिनिकबाट औषधी सेवन गरेको हुनुपर्छ ।
कस्तो लक्षण हुन सक्छ ?
स्ट्रेप्तोब्यसिलरी ब्याक्टेरियाले संक्रमण गरे ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांशपेशीका दुख्ने, बान्ता हुने, जोर्नी दुख्ने र शरीरमा बिबिरा आउने हुन सक्छ । औसतमा टोकेको तीन देखि दश दिनमा यी लक्षणहरु देखिने गर्दछ । ज्वरो आएको २÷४ दिनमा हात खुट्टाहरुमा रातो बिबिरा देखिन सक्छ । यदी स्पाईरिलम ब्याक्टेरियाले संक्रमण गरे ज्वरोको अलावा टोकेको ठाउमा खत देखिने, ग्रन्थिहरु सुन्निने, र बिबिराहरु देखिन सक्छ । यी लक्षणहरु एक देखि तीन हप्ता सम्ममा देखिने गर्दछ । यदी समयमा नै उपचार नपाए फोक्सो, मुटु, टाउको लगायत अरु अंगहरुमा संक्रमण गर्न सक्छ । एन्टीबयोटिक चिकित्सकको परामर्श अनुसार लिएमा यस्ता जटिलताबाट बच्न सकिने छ ।
मुसाको टोकाईबाट कसरी बच्ने ?
मेरो धेरै बर्षको अनुभवमा धेरै जसो नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले कुनै कारणले मुसालाई समात्न जादा वा मर्न खोज्दा वा सुतेको बेला टोकेको देखिन्छ । तसर्थ सकेसम्म मुसालाई नसमात्ने वा समात्नै परे राम्ररी पन्जा लागएर मात्र समात्ने वा मार्ने, र त्यस्तै कोठामा सुत्दा झुल लगाएर सुत्ने वा मुसा ओहोरदोहोर गर्ने वातावरण नै सृजना नगरिदिने उपायहरु अपनाउनु पर्छ ।
अन्तमा, के मुसाले टोकेर रेबिज रोग लाग्छ ?
टेकु अस्पताल आउनुको प्रमुख कारण उपचार सँगै यही प्रश्न को उत्तर खोज्न नै हो । यसबारेमा धेरै भ्रमहरु रहेको पाइन्छ । हालसम्म संसारमा कतै मुसाले टोकेर रेबिजÞ लागेको ईतिहास छैन र सम्भावना पनि देखिदैन । विश्व स्वस्थ संगठन र नेपाल सरकारले पनि मुसाले टोकेमा रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउनु नपर्ने भनेर निर्देशिका नै जारी गरेको छ । तसर्थ यस अस्पतालमा मुसाले टोकेमा रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउनै गर्दैन । तर मुसाको टोकाईबाट माथि उल्लेख भए जस्तै ब्याक्टेरियाको कारणले मानिसहरु बिरामी हुन सक्ने भएको बिशेष ध्यान भने दिनु पर्छ । र आवश्यक परे चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनु पर्छ । किनभने समयमा उपचार नगरे यसको मृत्युदर ७ देखि १३ प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ ।